Hitch iyo Suuqgeynta | Martech Zone
Saturday, May 26, 2007 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Haddii aadan waligaa fursad u helin, daawato filimka Hitch. Filimku waa labo sano jir, laakiin wali waa sarbeeb cajiib ah suuq geyn. Filimka, Alex Hitchens (Will Smith), wuxuu wax baraa ragga iyaga oo aan fursad u helin inay helaan gabadha ay ku riyoodaan. Talada uu bixinayo ayaa ah inuu isku dayo inuu yareeyo cilladahaaga dhalaalaya, fiiro gaar ahna u yeelo taariikhdaada, oo aad sameyso shaqada guriga.
Muuqaalka ugu xusuusta badan waa goob xawaare-shukaansi ah oo muran ka socdo. Sara (Eva Mendes) gabi ahaanba waa lagu caayay in Hitch uu horay u sii qorsheeyey taariikhaha, isaga oo qoday tilmaamo ku saabsan iyada iyo qoysaskeeda dhaxalka si timirtu uga dhigto mid xusuus badan. Waa lagu caayay in iyada la fara xumeynayo, Hitch wuu yaabay maxaa yeelay wuxuu kaliya isku dayayaa inuu sameeyo waxyaabo iyada ka guuleysanaya.
Filimka waxaa udub dhexaad u ah inuu daacad yahay iyo in kale. Ma ahayn tababbarka, isbeddelada, qorsheynta, iwm ee runtii ka careysiiyay Sarah, waxay ahayd fikradda ah in Hitch uusan daacad ka ahayn, uusan raadineynin xiriir, lagana yaabo inuu kaliya raadinayay inuu dhigo qormooyin kale gogoshiisa sariirta.
Suuqgeyntu waxay ku saabsan tahay sameynta casharrada gurigaaga si aad u fahamto macmiilkaaga ama rajadaada, ka dib markaa inaad xiriir ku dhisto daacadnimo iyo kalsooni. Inbadan oo naga mid ah waxay leeyihiin badeecooyin iyo adeegyo aad u wanaagsan, laakiin ma awoodno inaan 'soo jiidanno' dadka isku dayaya alaabadaas ama adeegyadaas. Haddii ay fursad uun na siiyeen, waxaan ognahay inaan u beddeli karno macaamil na jecel.
Waxaa laga yaabaa inay jiraan wax yaabi ah xaqiiqda ah in Internetku leeyahay adeegyo shukaansi aad u tiro badan iyo lataliyayaal badan oo suuq geyn ah. Inteena ugu badani waxay u baahan yihiin in laga caawiyo Suuqgeyntayada (iyo helitaanka gabadha!).
Tags: Dataqabashada xogtakadhacmarketingQorsheyntawuu dili doonaa
Doug, waxaan arkay filimka laba jeer waxaanan ku dabaqay noloshayda gaarka ah iyo tan xirfadeed. Waxay ii heshay ninkii aan waligay dhihi jiray waxaan doonayaa iyo shaqo cabsi leh oo aan laga adkaan karin. Siyaabaha qaarkood waa kaliya filim, laakiin hadaad si dhab ah u daawato, waxay u egtahay falsafada nolosha. Taladu waxay u shaqeysaa helitaanka wiilka / gabadha, u guurista shirkadda iyo sameynta ganacsi cusub ama xitaa helitaanka gurigaagii ugu horreeyay. Xaaladahaas oo dhan waxaad dooneysaa inay noqdaan kuwa kuugu fiican, samee shaqada gurigaaga oo runti fiiro gaar ah u yeelo waxa socda.
Duane, taasi waa wax laga naxo! Waan ku faraxsanahay inaanan ahayn kan kaliya ee sida farriinta hoose aad u jecel.
Waan ku raacsanahay. Waxaan ka dhisay macaamiishayda laba shirkadood oo ah leben iyo hoobiye. Mid ka mid ah meheradaheyga, waxaan runti awoodnay inaan ku kala soocno suuqa dhexdiisa annagoo daacad u ah macaamiisheena dayactirka kumbuyuutarka! Waa maalin murugo leh markaad tahay mid ka mid ah meheraddihii ugu dambeeyay ee dayactirka kombiyuutarka daacadda ah!
Waxaan ku jiray ganacsiga qalabka indhaha oo il-biriqsi maxaa yeelay si fudud uma tartami karin. Waxaan dhisi lahaa hal hektar oo nidaamka ah laakiin waxaan helayay badhidayda oo ay dabooleen emachines kuwaas oo ahaa 1/3 kharashka. Waxay u badan tahay inaan sii joogi lahaa meheradda laakiin waan ka daalay sharraxaadda inaad bixinayso tayada - xitaa kombuyuutarrada oo dhammaantood ku soo gala sanduuqa balaastiga iyo birta.
Hal shay baad ku saxantahay… waxaa aad u yar ganacsiyada dayactirka kumbuyuutarka ee u adkeysan kara cadaadiska tartanka. Waxay markhaati u tahay shirkaddaada! Hambalyo.